တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ တပ်မတော်၏အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ စစ်သေနာပတိ ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုသည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ အကြီးအကဲလည်း ဖြစ်သည်ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀(ဂ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် အဆင့် ၈ တွင် ရှိသော်လည်း တပ်မတော်က ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ဒုတိယသမ္မတအဆင့်ရှိသူဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် ၏ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၁ (၂၀၁၁-၀၃-၃၀) မှစ၍
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၁၉၄၅ – ၁၉ ဇူလိုင် ၁၉၄၇ ခေတ်သစ်မြန်မာတပ်မတော် တည်ထောင်သူ, ရဲဘော်သုံးကျိပ်၏ခေါင်းဆောင်
father of Pro-Democracy leader Aung San Suu Kyi Was offeredapost of Deputy Inspector General of post WW2 Burma Army under Major General T Thomas but declined. So Aung San never served as Commander in Chief of post WW2 Burma Army but became Vice Chairman of HM Governor's council (Prime Minister) and Defence Councillor (Defence Minister from 22 September 1946 to 19 July 1947 according to Myanmar Official History records)
BC 3501 ဗိုလ်မှူးချုပ် ဗိုလ်လက်ျာ ၁၉၄၇–၁၉၄၈ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည်, Vice Commander in Chief of PBF in 1945. Aung San chose him to replace him asaDeputy Inspector General of post WW2 Burma Army in December 1945. Became Brigadier and replaced Aung San as Deputy Prime Minister and Defence Minister when the latter was assassinated on 19 July 1947. Was made to resign from the post in February 1949 by AFPFL Government according to "Phay Phay Bo Let Yar by his daughter, Dr Khin Let Yar and other Myanmar official history records. Never wasaCommander in chief of post WW2 Burma Army
BC5106 ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စမစ်ဒွန်း ၄ ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၈ – ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၉ ကရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် အငြိမ်းစားပေးခံခဲ့ရသည်
BC3503 ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၄၉ – ၂၀ ဧပြီ ၁၉၇၂ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရာထူးကို တပ်မတော်၏ စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
BC3569 ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစန်းယု ၂၀ ဧပြီ ၁၉၇၂ – ၁ မတ် ၁၉၇၄ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
BC3651 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ တင်ဦး ၁ မတ် ၁၉၇၄ – ၆ မတ် ၁၉၇၆ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
BC5332 ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင် ၆ မတ် ၁၉၇၆ – ၃ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၅ အသက် ၆၀ တွင် အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။
BC6187 ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် ၄ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၅ – ၂၂ ဧပြီ ၁၉၉၂ ကျန်းမာရေးကြောင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ ရာထူးကို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
BC6710 ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၂၂ ဧပြီ ၁၉၉၂ – ၃၀ မတ် ၂၀၁၁ အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်
BC14232 ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၃၀ မတ် ၂၀၁၁ – လက်ရှိ
ပြည့်ဖြိုးအောင်၊ အောင်မင်းသိန်း (၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀)။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံး၏ အကြီးအကဲအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀(ဂ) အား ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုသင့်ဟု တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေး။ Eleven Media Group။ ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
စိုင်းဝဏ္ဏ (၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀)။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ဒုတိယသမ္မတအဆင့်ရှိသူဟု တပ်မတော်ထုတ်ပြန်။ မြန်မာတိုင်း(မ်)။ ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။